Toriteny Alahady 04 Martsa 2018 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Tena tian’Andriamanitra isika olombelona. Nisahiranan’Andriamanitra mihitsy isika tamin’ny nahary antsika Izy (nakany vovo-tany sy nasiany fofon’aina ary notsofiny rano) fa tsy notonontononiny fotsiny tahaka ireo voaary hafa. Ka izay fitiavan’Andriamanitra izay no ambaran’ny Tenin’Andriamanitra amintsika amin’ity Alahady ity.
Voalohany, ao amin’ny Boky Eksaody, alohan’ny nanomezan’Andriamanitra ny lalàna dia nambarany aloha fa tiany isika. Tsy ny vahoaka Israely no afaka nivoaka tany Ejipta fa Andriamanitra no naniraka an’i Moizy sy Arôna hamoaka an’ireo vahoaka ireo. Ary teny an-dalana no nanehoany ny fitiavany fa Andriamanitra hanafaka ny vahoaka Izy fa tsy Andriamanitra hampijaly. Ary mba hiainantsika izany fitiavany izany dia nomeny ny didy folo (10 = fahalavorariana). Soa ihany fa nomen’Andriamanitra ny didiny isika mba hahafahantsika miaina araka ny sitrapony, mandeha am-pahamarinana, ho lavorary.
Faharoa, ao amin’ny taratasy faharoan’i Md Paoly ho an’ny Korintianina. Ambaran’i Md Paoly fa ny Hazofijaliana no amantarana fa tian’Andriamanitra isika satria ny zanany no nomeny antsika, ary ny olombelona rehetra no novonjeny. Manambara ny tena fahendren’Andriamanitra sy ny fitiavany antsika ny Hazofijaliana satria ny namantsihana an’i Jesoa dia ny mba hanonitra ny fahotantsika rehetra fa tsy hoe Izy no nanota.
Farany, ao amin’ny Evanjely nosoratan’i Md Joany, ny nanomezan’Andriamanitra ny Tempoly dia manambara ihany koa ny fitiavany antsika. Aoka ny Fiangonana, hoy i Jesoa, tsy ho fitadiavana tombontsoa, harena ary voninahitra. Hatramin’izay dia efa fomba mahazatra ny mivarotra voromailala, ondry, … ao an-tempoly mba hanaovana sorona, fa tamin’ny andron’i Jesoa vao hita fa tsy mety izany. Ka tokony hitady ny fahazaran-dratsintsika koa isika ary miezaka miala amin’izany satria nasian’i Jesoa hasina ny Tempoly dia ny Fiangonana sy ny tenantsika izany.